Xiddig-Sirus - Wikipedia
A bust of Sopdet, Egyptian goddess of Sirius and the fertility of the Nile, syncretized with Isis and Demeter
Xiddig-Sirius. Sirius (/ sɪriəs /, riwaayad Giriig ah, Seirios, iftiin "iftiin" ama "cambaareyn") waa nidaam xiddig iyo xiddiga ugu quruxda badan samada habeenkii ee Earth. Iyadoo baaxad muuqata oo muuqata oo ah -1.46, waxay ku dhawaad ​​laba jeer u iftiimaysaa sida Canopus, xiddiga xiga ee ugu quruxda badan. Nidaamka wuxuu leeyahay magac tilmaamaya Alpha Canis Majoris (α CMa). Waxa indhaha qaawan ay u aragto xiddig kaliya ayaa ah nidaam xiddid ikhtiyaar ah, oo ka kooban xiddig caddaan ah oo muujinaya nooca A0 ama A1, oo lagu magacaabo Sirius A, iyo saaxiibka cirifka cad ee DA2, oo loo yaqaan Sirius B. fogaanta kala goynta Sirius A ee saaxiibkaa way kala duwan yihiin inta u dhexeysa 8.2 iyo 31.5 AU.
Xiddiga ugu quruxda badan samada habeenkii, Sirius waxaa lagu diiwaan geliyaa rikoodhka ugu horeeya ee xiddigaha. Hoos-u-dhaca ka yimid qulqulatooyinka ayaa sabab u ah qaabkan si caadi ah marka loo barbardhigo xiddigaha kale, iyada oo ku dhawaad ​​si buuxda 365.25 cisho ku haysa inta udhaxeysa sannadka qoraxda. Tani waxay ka dhici doontaa magaalada Qaahira 19 Julio (Julian), iyada oo la dhigey ka hor inta aan la gaarin xilliga xagaaga iyo bilawga daadadka sanadlaha ah ee Niilka.
Iyadoo la tiirsanaan la'aanta daadadkeedii, oo lagu caabuday sida ilaahyada Sopdet (Baaskiilka Masar: Spdt, "Triangle"; Giriig: Σῶθις, Sōthis) Taariikhda muwaadiniinta Masaaridu waxay sida muuqata u bilaabatay inay sannadka cusub "Mesori "waxay ku haboontahay muuqaalka Sirius, inkasta oo ay la'dahay sanooyin badan oo kufilmaamid ah macneheedu waxa weeye in isku xirnaantaas kaliya lagu hayo muddo afar sano ah. ilaa laga gaaro taariikhda ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan bilaha dambe. Masriyiintu waxay sii wadeen in ay ogaadaan in Sirius soo laabashada sannadkii, taasoo horseed u noqon lahayd helitaanka wareegga 1460-kii Sothic oo saameyn ku yeeshay horumarinta Julian iyo Alexandrian jagooyinka.
Giriiggii qadiimka ahaa ayaa arkay in muuqaalka Sirius uu ahaa xagaaga kulaylka ah oo qallafsan, wuxuuna ka baqay in uu dhirta u abuuro, ragga si ay u jilciyaan, iyo inay noqdaan haweenka uur-ku-kacay. Sababtoo ah iftiinkeeda, Sirius ayaa lagu ogaan lahaa in badan oo ka mid ah xaaladaha cimilada ee aan fiicnayn ee xagaaga hore. Goobaha Giriigga ah, waxay tilmaamayaan qaar ka mid ah weedhiyadaha qaarkood oo sababay saameyn xun. Qof kasta oo la dhibtoonaya waxaa la sheegay inuu yahay "xiddig-dhufasho" (calaamadda, astroból'tos). Suugaanta "gubida" ama "dabka" sida lagu sharaxay. Xilliga soo socota waxa ay soo socotaa muuqaalkii xiddiga xiddigga ahaa isagoo ah maalmaha eyda.
Dadka ku nool jasiiradda Ceos ee ku yaal Badda Aegean waxay Sirius iyo Zeus u keeni karaan in laga dhigo meelo qaboojis ah, iyo xiddigaha xagaaga ee sugaya. Haddii ay caddahay, waxay kufadhigaysaa nasiib wacan; haddii uu ahaa qalad ama suuxdin kadibna waa cudur daar ah (ama xayawaan). Coins oo laga soo qaaday jasiiradda qarnigii 3aad ee qarnigii Eeyada ama xiddigaha oo leh sawirro dabaysha, oo muujinaya muhiimadda Sirius. Roomaaniyiintu waxay u dabaaldegeen heeganka Sirius oo ku wareegsan 25-kii Abriil, oo eey ku bixiyeen eey, oo ay la socdaan foox, khamri, iyo ido, ilaaheeyda Robigo si ay u noqoto mid ka soo baxaysa xiddigaha qorraxda sano.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiddig-Sirus&oldid=224545"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Nofeembar 2021, marka ee eheed 21:59.